Wariye Caan Ah Oo La Toogtay - Wararka Maanta: Somali News Online
Weriye caan ah oo dambiyada baara oo u dhashay dalka Holland ayaa si culus loo dhaawacay ka dib markii lagu toogtay waddo ku taal magaalada Amsterdam.
Booliiska ayaa sheegay in weriye Peter R de Vries cisbitaalka loo qaaday asagoo ku jira xaalad adag ka dib markii fiidnimadii Talaadada lagu toogtay faras magaalaha Amsterdam.
Warbaahinta qaranka ee NOS ayaa sheegtay in la soo weeraray ka dib markii uu ka soo muuqday barnaamij lagu sheekeysto oo ka baxa TV-ga.
Muuqaal ayaa muujiyay isaga oo jiifa sagxada oo madaxiisa uu dhaawac ka muuqdo.
NOS ayaa soo xigatay goob jooge sheegaya in shan xabadood lagu dhuftay weriyaha ayna xabadahaasi madaxa ka haleeleen.
Booliska ayaa codsanaya markhaatiyaasha iyo muuqaalka CCTV ee toogashada, balse waxay dadka ka codsadeen in waxyaabahaas aysan la wadaagin baraha bulshada.
Booliiska ayaa raadinaya nin cad oo caato ah, oo qaba jaakad cagaaran iyo koofiyad madow.
Waxaana dadka laga codsaday in ninkaas aysan u dhawaan ninkaas hadday arkaan oo ay wacaan adeegga wicitaanka deg degga ah.
Wargeyska The Algemeen Dagblad ayaa sheegay in qof la tuhunsan yahay lagu xiray Koonfurta Amsterdam balse arrintaas ma aanay xaqiijin booliisku.ss
Kenya oo xal raadinaysa afduubka ku soo badanaya – Wararka Maanta:…
Wararka Maanta : Wararkii ugu Danbeeyey Awooda Ciidamada Masar & itoobiya Dagaalka Laga...